सरकारमा जान रोकिए वामदेव, मनोनित सांसदबाट राजीनामा दिने !
काठमाडौं। भैंसेपाटीमा सँगै घर भएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनाईपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बल्ल निश्चिन्त भएकि उनी सरकारमा कुनै हालतमा लगिनेछैनन् । त्यसै पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय चलाउने गरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगिएका छन् ।
बिहिबार, असोज २९, २०७७, १९:१८:००
महानगरका ‘भ्रष्टाचारी’लाई ‘कुचो’ लगाउँदै अनेरास्ववियू (भिडियाे सहित) जो भ्रष्टाचारमा लिप्छ उस्ले कसरी खोज्छ ? आयाेग दुधको साँची विरालो जस्तै हाे ।
बिहिबार, साउन २९, २०७७ सारङ्गी न्युज
पोखरा महानगर भ्रष्टाचारको अखडाभएको भन्दै सुशासन र समृद्धिको लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध कुचो अभियान पुरा पढ्नुहोस्
सोमबार, साउन १९, २०७७ सारङ्गी न्युज